धमलाको फिल्म कलाकार र नेताले हेरे, दर्शकले हेरेनन् ! – Mero Film
धमलाको फिल्म कलाकार र नेताले हेरे, दर्शकले हेरेनन् !
नेता र कलाकारलाई फिल्म हेराउने बानी बसाल्न आवश्यक छ । उनीहरुले फिल्म हेर्ने बानीको विकास पनि गर्नुपर्छ । तर, नेता र नाम सुनिएका कलाकारले हेर्दैमा हलमा दर्शक पनि उनीहरुकै कुरा सुनेर आइहाल्छन् भन्ने हुदैन ।
उदाहरणका लागि पत्रकार ऋषि धमलाले नै निर्माण गरेको अनुराग फिल्मलाई लिदा होला । यो फिल्म शुक्रबारबाट लागेको हो । यो फिल्म हेर्न दर्शक देशभर नै छैनन् । तर, पत्रकार ऋषि धमला दोश्रो हप्तामा पनि दर्शक हलसम्म तानेरै छाड्ने कसरतमा छन् । नेता र कलाकारसँग राम्रो सम्बन्ध भएका ऋषिले हरेक दिन कुनै न कुनै कलाकार र नेतालाई हलसम्म ल्याएका छन् ।
मन्त्री लालबाबु पण्डित, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले फिल्म हेरिसके । फिल्म हेरेर कोही रोए त कसैले दर्शकलाई राम्रो फिल्म बनेको भन्दै हेर्न अपिल पनि गरे । कलाकारलाई पनि धमलाले फिल्म हेर्न ल्याएको ल्याई नै छन् । तर, धमलाको फिल्म हेर्न दर्शक हलमा पुगेका छैनन् ।
अब, विस्तारै फिल्मले दम तोड्दैछ ।भोली शुक्रबारदेखि धेरै हलमा फेरिने छनक पनि छ । कलाकार र नेताले हेर्दैमा फिल्म चल्दैन, फिल्म नै राम्रो हुनुपर्छ धमला जी ।
२०७५ असोज १८ गते १३:२१ मा प्रकाशित